အွန်လိုင်းကနေ ကျူ တော့မှာလား? ဒါတွေသိထား… | သိလိုရာမေး
ဒေါက်တာဒိအားမေးရန် အွန်လိုင်းကနေ ကျူ တော့မှာလား? ဒါတွေသိထား…
အခု ၂၁ ရာစုက Digital ခေတ်ဆိုတဲ့အတိုင်း ဆယ်ကျော်သက် ကလေးတွေကအစ လူကြီးသူမအဆုံး ဖုန်းတကိုင်ကိုင်နဲ့ အင်တာနက်သုံးနေကြတာကို တွေ့ကြတာကို တွေ့ကြမှာပါ။
အင်တာနက်သုံးတဲ့အခါမှာလဲ လူမှုကွန်ယက်တွေမှာ ရိုးရိုးတန်းတန်း စာရိုက်ပြီး ချက်တင်ထိုင်တာကအစ ဗီဒီယိုကောလ်တွေနဲ့ ရုပ်ကြည့်စကားပြောကြတာတွေလဲ ရှိလာကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလို ရိုးရိုးတန်းတန်း ချက်တင်ထိုင်တာကနေ ကွဲထွက်ပြီး မတူတာကတော့ Sex Chat တာပါပဲ။ အွန်လိုင်း Chatroom တွေကနေတဆင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စတွေကို ရိုးရိုး Text နဲ့ဖြစ်စေ၊ ရုပ်မြင်ရတဲ့ Video Chat နဲ့ပဲဖြစ်စေ ပြောသမျှအားလုံးကို Sex Chat တယ်ဆိုပြီး သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်။
Sex Chat တာကို တချို့သော အဝေးရောက်နေတဲ့ LDRS တွေကလဲ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အဆက်သွယ်မပြတ် အလွမ်းဖြေဖို့ သုံးကြသလို အပြင်မှာ တစ်ခါမှလဲ မသိဖူး မမြင်ဖူးတဲ့ သူစိမ်းတွေနဲ့ Sex Chat ကျတာမျိုးတွေလဲ ရှိနေပါသေးတယ်။ ဘယ်သူတွေနဲ့ပဲ ချက်သည်ဖြစ်စေ အရာရာတိုင်းမှာ အကောင်းနဲ့ အဆိုးကတော့ ဒွန်တွဲနေတာပါပဲ။ ဒီတော့ ကိုယ်က ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တခြားသူနဲ့ ဖြစ်ဖြစ် Sex Chat ဖို့ စိတ်ကူးတဲ့အခါမျိုးမှာ သိထားရမယ့် ကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုးလေးတွေကို တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Sex Chat တယ်ဆိုတာ တကယ်တော့ မထိမတွေ့ဘဲနဲ့ ဖီးလ်လို့ကောင်းတဲ့ အရာတစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ ပုံမှန် အပြာရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွေ၊ အပြာစာအုပ်တွေ ဖတ်ပြီး အာသာဖြေတာမျိုးနဲ့တောင် ခပ်ဆင်ဆင်တူပါတယ်။ ဒီတော့ ဖြစ်နိုင်ခြေမရှိ၊ လက်တွေ့မကျတဲ့ အရာတွေကို ကြည့်ပြီး ဖီးလ်တာထက် သက်ရှိလူတစ်ယောက်ကို လေလှိုင်းပေါ်မှာ တွေ့ပြီး ခံစားရတဲ့ ဖီးလ်က ပိုကောင်းနေတတ်တာကတော့ သူ့ရဲ့ ကောင်းကျိုး တစ်ခုပါပဲ။
တချို့သော LDRS တွေ၊ အနေဝေးနေရတဲ့ အိမ်ထောင်သည်တွေ အတွက် လူချင်းမတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာ မပြည့်ဝတဲ့ လိင်ဆန္ဒကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မယ့် တစ်ခုတည်းသော အရာပါပဲ။ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ LDRS တွေ၊ အနေဝေး အိမ်ထောင်သည်တွေက ဒီလို အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ Sex Chat တာကို အနည်းဆုံး ၂ကြိမ်ကနေ ၃ ကြိမ်အထိ လုပ်ဖူးကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲ့လိုပြုလုပ်ဖူးသူတွေကလဲ ရှိနေပြီးသား လိင်မှုဘဝ ဆက်ဆံရေးတိုးတက်ဖို့အတွက် Sex Chat တာက တစ်ဖက်တလမ်းက အထောက်အကူပြုတယ်လို့လဲ ဝန်ခံထားကြပါတယ်။
နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ မိန်းမနဲ့ ယောကျာ်းနှစ်ဦးက အွန်လိုင်းပေါ်မှာပဲ Sex Chat တာဖြစ်တဲ့အတွက် တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အထိအတွေ့ဆိုတာလဲ မရှိနိုင်ပါဘူး။ ဒီတော့ လိင်ကနေတဆင့် ဖြစ်တဲ့ STIs ရောဂါတွေ ကူးစက်နိုင်တဲ့ အန္တရာယ်လဲ မရှိသလို မလိုလားအပ်တဲ့ ကိုယ်ဝန်ရသွားမှာကိုလဲ စိုးရိမ်စရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး။
သမီးရည်းစားစုံတွဲတွေ Sex Chat ကြတဲ့အခါမှာ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး ရင်နှီးချစ်ခင်နေတဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့ ကိစ္စမရှိပေမယ့် နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ အချစ်ရေး ပြတ်စဲသွားတဲ့အခါမှာ ရည်းစားဟောင်းကနေပဲ ကိုယ့်အချက်အလက်တွေကို လူမှုကွန်ယက်တွေမှာ ဖွတဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေကို ကြားဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီတော့ ကံမကောင်း အကြောင်းမလှရင် ဒီလို ဆိုးကျိုးတွေ ရင်ဆိုင်ရနိုင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုကတော့ တခါတလေမှာ Sex Chat ဆိုတာက Consent ဆိုတဲ့ သဘောတူညီမှုမပါရင် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှောင့်ယှက်မှုတစ်ခုပါပဲ။ ဒီတော့ ကိုယ်နဲ့ မရင်းနှီး မသိကျွမ်းတဲ့ သူစိမ်းနဲ့ ဒီကိစ္စကို လုပ်ဖို့ စိတ်ကူးထားမယ်ဆိုရင်တော့ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် သဘောတူညီမှု ဆိုတဲ့အချက်ရှိဖို့လိုပါတယ်။ မဟုတ်ရင်တော့ ဆိုးကျိုးအနေနဲ့ တစ်ဖက်ရဲ့ သဘောတူညီမှုမပါဘဲ Sex Chat မိရင် တရားစွဲခံရနိုင်သလို အရေးယူခံရနိုင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်ကတော့ ကိုယ်နဲ့ Sex Chat မယ့် တစ်ဖက်လူက ဘယ်လောက်အထိ ယုံကြည်ရတဲ့သူလဲ၊ ဆိုတဲ့ အချက်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်နဲ့ Sex Chat တဲ့ တစ်ဖက်လူကြောင့်လဲ ညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုဒ်မှာ ကိုယ့်အချက်အလက်တွေ ရောင်းစားခံရတာ၊ လူမှုကွန်ယက်မှာ ကိုယ့်အကြောင်းတွေ ပျံ့နှံ့သွားတဲ့အတွက် ဂုဏ်သိက္ခာကျတာတွေ ရင်ဆိုင်ရနိုင်ပါတယ်။
အရာရာတိုင်းမှာ အကောင်းနဲ့ အဆိုးဆိုတာက ဒွန်တွဲနေတဲ့အတွက် အခု သိလိုရာမေးက ပြောပြထားတဲ့ Sex Chat ခြင်းရဲ့ ကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုးတွေကို ကြိုသိထားမယ်ဆိုရင် တကယ်တမ်း လက်တွေ့မှာ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်ကို အနည်းနဲ့အများ ရှောင်ရှားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။